Amaxwebhu e-FOI kwimvelaphi ye-SARS-CoV-2, iingozi zokufumana umsebenzi kunye neelebhu ze-biosafety-Ilungelo lase-US lokwazi
ezaposwa ngomhla Februwari 17, 2021 by UStacy Malkan
I-US Ilungelo lokwazi ukuphanda ngemvelaphi ye-SARS-CoV-2, kunye neengozi zeelebhu zokutya kunye nophando lomsebenzi, ejolise ekwandiseni ukosuleleka okanye ukubulawa kwezifo ezinokubangela ubhubhane. Sithumela uhlaziyo kunye neziphumo ezitsha ku Ibhlog yethu yeBiohazards.
I-baric imeyile ibatch # 2: iYunivesithi yaseNorth Carolina (2.17.21) (332 amaphepha).
Iirekhodi zeYunivesithi yaseNorth Carolina (UNC) uNjingalwazi URalph Baric.
Bona ingxelo yethu: I-imeyile ibonisa ukuba izazinzulu zixoxa ngokufihla ukubandakanyeka kwabo kwileta ephambili yejenali kwimvelaphi yeCovid kwaye Izazinzulu zaseTshayina zazifuna ukutshintsha igama le-coronavirus ebulalayo ukuyisusa e-China
IiRekhodi ze-CSU (1.21.21) (2276 amaphepha).
Iirekhodi zooNjingalwazi baseColorado State University (CSU) ooNjingalwazi uRebekah Kading kunye noTony Schountz- iintsholongwane ezifunda iintsholongwane ezinxulumene nelulwane ezixhalabisayo kwezokhuseleko kwiindawo ezishushu kwihlabathi liphela.
Bona ingxelo yethu: Zikhuseleke kangakanani ii-biolabs e-Colorado State? kwaye Amaxwebhu eYunivesithi yaseColorado State kwi-bat pathogen yophando
Ii-imeyile zeNCBI (12.29.20) (63 amaphepha).
IZiko leLizwe leNkcazelo yeBiotechnology (I-NCBI) ii-imeyile ezinososayensi be-coronavirus ababhale izifundo ezine eziphambili kwimvelaphi ye-coronavirus, malunga nokuhlaziywa kwabo kwiidathasethi ze-genomic ezinxulumene nezi zifundo.
Bona ingxelo yethu: Iidasethi eziguqulweyo ziphakamisa imibuzo ethembekileyo malunga nezifundo eziphambili kwimvelaphi yecoronavirus
Ii-imeyile zebaric: iYunivesithi yaseNorth Carolina (12.14.20) (83,416 amaphepha).
Ii-imeyile zikaGqirha Ralph Baric kunye ne-EcoHealth Alliance, iZiko laseWuhan leVirology, i-US National Academy of Science, iingcali ze-COVID-19 kunye neengcali kwi-biodefense kunye nezifo ezosulelayo. UGqirha Baric nguWilliam R. Kenan, Omnci
Bona ingxelo yethu: Ii-imeyile ezintsha zibonisa iingxoxo zesayensi malunga nendlela yokuxoxa ngemvelaphi ye-SARS-CoV-2 kwaye Izinto ezivela kwiingcali ze-coralvirus ze-imeyile zikaRalph Baric
I-imeyile ye-EcoHealth Alliance: kwiDyunivesithi yaseMaryland (11.18.20) (amaphepha angama-466).
Ii-imeyile zikaNjingalwazi Rita Colwell kunye nabasebenzi be-EcoHealth Alliance. UGqr Colwell ubalasele njengoprofesa weyunivesithi, isayensi ye-biomolecular kwiYunivesithi yaseMaryland. Ulilungu lebhodi yabalawuli ye-EcoHealth Alliance.
Bona ingxelo yethu: Umbutho we-EcoHealth Alliance wenza amalungiselelo esiteyitimenti sososayensi “ngemvelaphi yendalo” ye-SARS-CoV-2 kwaye Isazinzulu esinongquzulwano lomdla esikhokelayo Lancet I-COVID-19 ikhomishini kwi-virus imvelaphi
IiBiohazards intsholongwane ye-Corona, Umanyano lwe-EcoHealth, Amaxwebhu e-FOI, FOIA, Inkululeko yoMthetho woLwazi, Izifo ezosulelayo, SARS-selwe-2